Rugby – «Gold Top 20»: lavon’ny SCB Besarety ny STM | NewsMada
Rugby – «Gold Top 20»: lavon’ny SCB Besarety ny STM
Par Taratra sur 01/10/2018
Nitranga ny tsy nampoizina, teo amin’ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, «Gold Top 20», taranja rugby. Lavon’ny SCB Besarety, tamin’ny isa, 28 no ho 23 mantsy ny STM (Savony). Fihaonana notanterahina, omaly alahady, teny amin’ny kianja Alarobia. Nifanenjehana hatramin’ny minitra farany, ny isa. Nanohitra ary tsy nanaiky ho lembenana mihitsy ny Besarety, nanoloana an-dry Danger sy ry Dona.
Voahaja kosa ny lôjika, teo amin’ireo vokatra hafa. Nivoaka ho mpandresy avokoa mantsy ireo ekipa lehibe sy manana ny toerany. Anisan’ireny, ny Cosfa, nandavo ny UIRC, tamin’ny isa mavesatra, 78 no ho 19. Mbola nipetraka ny traikefa, nananan’ireo mpilalaon’ny Bebaoty, notarihin-dRahery. Nitarika hatrany am-boalohany, ny miaramila, tamin’ity. Toy izany koa ny nanilihan’ny Uscar, ny XV Fa Andohatapenaka, tamin’ny isa, 25 no ho 10. Nanatombo tamin’ny lafiny rehetra, ny ekipan’ny kaominina. Natanjaka teo amin’ny hazakazaka ary mbola mafy ihany koa tao anaty “pack d’avant”. Nahazo fandresena ihany koa ny JSTA Ambondrona, raha nidona tamin’ny XV Avenir. Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa, 19 no ho 15 ny Ambondrona. Sahirana ihany anefa ry zareo vao tojo fandresena satria nifanenjehana hatramin’ny farany, ny isa teny amin’ny solaitrabe.
Lavon’ny ASA Ambohimanarina, tamin’ny moka fohy, 13 no ho 12 kosa ny USA Ankadifotsy. Fihaonana, nampitsanga-mitoetra hatramin’ny farany. Tsy nampoizin’Ankady mihitsy ny endri-dalao, nasehon’Ambohimanarina, tamin’ity. Tsy nanano-sarotra kosa ny TFA nanoloana ny US Ikopa, izay lavony, tamin’ny isa, mazava, 33 no ho 12.